Ny fanjakan'Andriamanitra | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny ankapobeny, dia ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny fitondran'Andriamanitra dia efa miharihary eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainan'ny mpino tsirairay mankatò ny sitrapony. Ny fanjakan 'Andriamanitra dia haorina tanteraka ho lamin'izao tontolo izao aorian'ny fiverenan'i Kristy rehefa hanaiky izany ny zava-drehetra. (Salamo 2,6-9; 93,1-2; Lioka 17,20-21; Daniela 2,44; Marka 1,14-15; 1 Korintiana 15,24-28; Apokalypsy 11,15; 21.3.22 -27; 22,1-5)
Manaova bisy, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra! » Jaona Mpanao Batisa sy Jesosy dia nanambara ny maha akaiky ny fanjakan'Andriamanitra (Matio 3,2; 4,17; Marka 1,15). Efa akaiky ny fitondran'Andriamanitra efa hatry ny ela. Ity hafatra ity dia nantsoina hoe filazantsara, ny vaovao tsara. An'arivony no naniry hihaino sy hamaly an'io hafatra avy tamin'i Jaona sy i Jesosy io.
Fa mieritrereta vetivety aloha dia mety ho fihetsiky ny fihetsikareo raha nitory ianao: "Ny fanjakan'Andriamanitra dia mbola afaka 2000 taona." Mety handiso fanantenana ny hafatra ary ho nandiso fanantenana ihany koa ny fihetsiky ny besinimaro. Mety tsy ho be mpitia i Jesosy, mety tsy hialona azy ny mpitondra fivavahana, ary mety tsy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana i Jesosy. "Lavitra ny fanjakan'Andriamanitra" dia tsy vaovao vaovao na tsara.
Jaona sy Jesosy dia nitory ny Fanjakan'Andriamanitra, izay akaiky ny mpihaino azy. Nilaza ny hafatra ny amin'izay tokony hataon'ny olona amin'izao fotoana izao; natao avy hatrany sy maika izany. Niteraka fahalianana izany - fialonana. Tamin'ny nanambarany fa ilaina ny fanovana eo amin'ny fitondrana sy fampianarana ara-pinoana, ny masoivoho dia nanohitra ny sata miorina.
Fanantenan'ny jiosy tamin'ny taonjato voalohany
Betsaka ny Jiosy niaina tamin'ny taonjato voalohany no nahalala ny teny hoe "Fanjakan'Andriamanitra". Nangataka an’Andriamanitra ny handefasana azy ireo mpitarika izay handà ny fanjaka romana ka hanao ny firenena firenena mahaleo tena indray Jodia - firenena manana fahamarinana, voninahitra ary fitahiana, firenena izay hoentin'ny tsirairay.
Manoloana izany toe-javatra izany - ny fanantenanan fatratra nefa tsy voavaly ho an'ny fidirana an-tanana ho an'Andriamanitra - Jesosy dia nitory ny fanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra. "Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra," hoy i Jesosy tamin'ny mpianany taorian'ny nanasitranany ny marary (Matio 10,7; Lioka 19,9.11).
Saingy tsy notanterahina ilay fanantenan'ny fanjakana. Tsy naverina tamin'ny laoniny ny firenena jiosy. Ny ratsy kokoa aza dia rava ilay tempoly ary niparitaka ny Jiosy. Ny fanantenana jiosy dia mbola tsy tanteraka. Diso ve ny tenin'i Jesosy tamin'ny filazany na tsy nanambara fanjakam-pirenena iray ve izy?
Ny fanjakan'i Jesosy dia tsy nantenaina be loatra - araka ny azontsika fantarina amin'ny hoe maro ny Jiosy te hahita azy maty. Avy amin'izao tontolo izao ny fanjakany (Jaona 18,36). Rehefa feno izy io
Raha niresaka ny "Fanjakan'Andriamanitra" izy dia nampiasa teny izay takatry ny olona tsara, saingy nomeny dikany vaovao. Nilaza tamin'i Nikodemosy izy fa tsy hitan'ny ankamaroan'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra (Jaona 3,3) - raha te hahafantatra na hanandrana izany dia tsy maintsy havaozina ny Fanahy Masin'Andriamanitra (V. 6). Fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy fandaminana ara-batana.
Ny fanjakana ankehitriny
Tao amin'ny faminanian'ny tendrombohitra Oliva, dia nanambara i Jesosy fa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra rehefa misy famantarana sy faminaniana sasany. Saingy ny sasany amin'ireo fampianaran'i Jesosy sy fanoharana dia manazava fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho tonga tanteraka. Maniry am-pahanginana ny voa (Marka 4,26-29); Ny fanjakàna dia manomboka kely toy ny voan-tsinapy (V. 30-32) ary nafenina tahaka ny zaridaina (Matio 13,33). Ireo fanoharana ireo dia milaza fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia zava-misy alohan'ny hahatongavany amin'ny fomba mahery sy manaitra. Ankoatry ny fanatri-maso izany dia efa hita sahady.
Andeha hojerentsika ny andininy sasany mampiseho fa efa miasa ny fanjakan'Andriamanitra. Tao amin'ny Marka 1,15, dia nanambara i Jesosy: "Tonga ny fotoana ... tonga ny fanjakan'Andriamanitra." Ireo matoanteny ireo dia eo amin'ny fe-potoana teo aloha, izay milaza fa nisy zavatra nitranga ary mitohy ny vokatr'izany. Tsy tonga ho an'ny fanambarana fotsiny ny fotoana, fa ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra koa.
Taorian'ny nandroahany demonia, dia hoy i Jesosy: "Fa raha ny herin'ny Fanahy no amoahako ny fanahy, dia efa tonga aminareo ny Fanjakan'Andriamanitra" (Matio 12,2; Lioka 11,20). Eto ny fanjakany, hoy izy, ary ny porofo dia miaro ny fanahy ratsy. Mbola mitohy io porofo io ao am-piangonana ankehitriny satria manao asa lehibe kokoa noho ny nataon'i Jesosy ny Fiangonana (Jaona 14,12). Azontsika atao koa ny milaza hoe: "Raha amoahantsika ny fanahy ratsy amin'ny alalan'ny Fanahin'Andriamanitra, dia hiasa eto sy anio ny Fanjakan'Andriamanitra." Amin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra, ny Fanjakan'Andriamanitra dia manohy manaporofo ny fahefany lehibe amin'ny fanjakan'i Satana.
Mbola manan-kery i Satana, saingy resy sy voaheloka izy (Jaona 16,11). Voafetra tamin'ny ampahany izy (Marka 3,27). Jesosy nandresy ny tontolon'i Satana (Jaona 16,33) ary noho ny fanampian'Andriamanitra dia afaka mandresy azy ireo isika (1 Jaona 5,4). Saingy tsy ny tsirairay no maharesy azy. Amin'izao vanim-potoana izao, ny Fanjakan'Andriamanitra dia misy ny tsara sy ny ratsy (Matio 13,24: 30-36. 43-47. 50-24,45; 51-25,1; 12-14. 30). Mbola mitaona hery ihany i Satana. Mbola miandry ny hoavin'ny Fanjakan'Andriamanitra isika.
Ny Fanjakan'Andriamanitra, velona amin'ny fampianarana
«Ny Fanjakan'ny lanitra dia mbola mijaly noho ny herisetra ary maka izany ny herisetra» (Matio 11,12). Ireo matoanteny ireo dia amin'ny endrika ankehitriny - ny fanjakan'Andriamanitra dia nisy tamin'ny andron'i Jesosy. Ny andalan-teny iray mitovy, ny Lioka 16,16, dia mampiasa matoanteny ihany koa ankehitriny: "... ary samy manery ny tsirairay". Tsy mila fantarintsika hoe iza ireo olona mahery setra ireo ary nahoana izy ireo no mampiasa herisetra - ny zava-dehibe eto dia ny hoe miresaka momba ny Fanjakan'Andriamanitra ireo andininy ireo.
Ny Lioka 16,16 dia manolo ny ampahany voalohany amin'ny andininy hoe "... dia mitory ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra". Ity fiovan'ny vinavina ity dia milaza fa ny fandrosoan'ny fanjakana amin'izao vanim-potoana izao dia mifanaraka amin'ny fananganana azy. Ny Fanjakan'Andriamanitra dia efa misy - ary mandroso amin'ny alàlan'ny fanambarana azy io.
Ao amin'ny Marka 10,15, i Jesosy dia manasongadina fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia zavatra tsy maintsy raisinay amin'ny fomba hafa, mazava ho azy amin'ity fiainana ity. Ahoana no misy ny Fanjakan'Andriamanitra? Tsy mbola mazava ny antsipiriany fa ireo andinin-teny izay nojerenay ireo dia efa misy izany.
Ao amintsika ny fanjakan'Andriamanitra
Nisy Farisiana sasany nanontany an'i Jesosy hoe rahoviana no ho avy ny fanjakan'Andriamanitra (Lioka 17,20). Tsy hainao io hoy i Jesosy. Fa hoy koa i Jesosy: «Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo [a. U. eo afovoanao] » (Lioka 17,21). Jesosy dia mpanjaka, ary noho izy nampianatra sy nanao fahagagana teo amin'izy ireo, dia teo amin'ny Fariseo ny fanjakana. Jesosy dia ao amintsika ankehitriny, ary toy ny teo amin'ny Fanjakan'Andriamanitra teo amin'ny asan'i Jesosy, dia toy izany koa eo amin'ny fanompoana ny Fiangonany. Eo anilanay ny mpanjaka; Ny heriny ara-panahy dia ao anatintsika na dia tsy mbola miasa ao amin'ny heriny feno aza ny fanjakan'Andriamanitra.
Efa nafindra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika (Kolosiana 1,13). Efa mandray fanjakana isika ary ny valin-tenintsika marina dia ny fiankohofana sy ny fahatahorana (Hebreo 12,28). I Kristy «dia nanao antsika [fefy teo aloha] ho fanjakan'ny mpisorona» (Apokalypsy 1,6). Vahoaka masina isika - ankehitriny sy ankehitriny - fa izay mbola hitranga dia tsy mbola nambara. Andriamanitra dia nanafaka antsika tamin'ny fanjakan'ny ota ary nametraka antsika ho ao amin'ny fanjakany eo ambany fahefan'ny fanapahana.
Eto ny fanjakan'Andriamanitra, hoy i Jesosy. Ny mpihaino azy dia tsy voatery niandry ny Mesia nandresy - efa manjaka Andriamanitra ka tokony hiaina amin'ny lalany isika. Tsy mbola manana faritany ihany isika fa tonga eo ambany fitondran Andriamanitra.
Mbola hisy ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny hoavy
Ny fahafantarana fa efa misy ny Fanjakan'Andriamanitra dia manampy antsika handinika bebe kokoa ny fanompoana ny hafa manodidina antsika. Saingy tsy hadinontsika fa mbola ny ho vita ny Fanjakan'Andriamanitra dia mbola amin'ny ho avy. Raha irery ihany ny fanantenantsika dia tsy manam-panantena firy isika (1 Korintiana 15,19). Tsy manan-tsafatra isika fa ny fanjakan'Andriamanitra
mitondra tafiditra ezaka. Rehefa miatrika fanelingelenana sy fanenjehana isika, rehefa hitantsika fa ny ankamaroan'ny olona dia mandà ny filazantsara, dia mahazo hery avy amin'ny fahalalana isika fa amin'ny vanim-potoana ho avy ny fahafenoan'ny fanjakan'ny fanjakana.
Na manao ahoana na manao ahoana fiezahantsika hiaina amin'ny fomba fanehoana an'Andriamanitra sy ny Fanjakany isika dia tsy afaka manova an'ity tontolo ity ho Fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy tonga amin'ny alàlan'ny fitsabahana manaitraitra izany. Ny hetsika apokalipika dia ilaina amin'ny fahatongavan'ny taom-baovao.
Betsaka ny andininy milaza amintsika fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia ho zava-misy mahafinaritra amin'ny ho avy. Fantatsika fa mpanjaka i Kristy ary maniry ny andro izay hampiasany ny heriny amin'ny fomba lehibe sy manaitra mba hampitsaharana ny fijalian'ny olombelona. Ny bokin'i Daniela dia manambara fanjakan'Andriamanitra izay hanjaka amin'ny tany rehetra (Daniela 2,44; 7,13-14. 22). Ny Bokin'ny Apokalypsy Testamenta Vaovao milaza ny fahatongavany (Apokalypsy 11,15:19,11; 16).
Mivavaka izahay mba hahatongavan'ny fanjakana (Lioka 11,2). Ny mahantra amin'ny fanahy sy ny mpanenjika dia miandry ny "valiny any an-danitra". (Matio 5,3.10.12). Ho tonga amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ny olona amin'ny “andro” fitsarana (Matio 7,21: 23-13,22; Lioka 30). Jesosy dia nanao fanoharana iray satria nino ny sasany fa hanjaka ao anatin'ny fotoana fohy ny fanjakan'Andriamanitra (Lioka 19,11).
Ao amin'ny faminanian'ny Tendrombohitra Oliva dia nofaritan'i Jesosy ny zava-niseho lehibe izay hitranga alohan'ny hiverenany amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Taloha kelin'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia nanantena fanjakany ho avy i Jesosy (Matio 26,29).
Paul dia niresaka imbetsaka ny "mandova ny fanjakana" ho toy ny zavatra niainana amin'ny ho avy (1 Korintiana 6,9: 10;
15,50; Galatiana 5,21; Efesiana 5,5) ary, amin'ny lafiny iray, manondro amin'ny fiteniny hoe izy no
Heverina ny fanjakan'Andriamanitra ho zavatra izay ho tanteraka amin'ny faran'ny taona ihany (2 Tesaloniana 2,12:2; Th
1,5; Kolosiana 4,11:2; 4,1.18 Timoty,). Rehefa mifantoka amin'ny fisehoan'ny fanjakana ankehitriny i Paoly, dia mety hampiditra ny teny hoe "fahamarinana" miaraka amin'ny "fanjakan'Andriamanitra." (Romanina 14,17) na tokony hampiasaina ho solony (Romana 1,17). Jereo ny Matio 6,33 ho an'ny fifandraisana akaiky ny Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Sa i Paul dia mirona (raha tsy izany), hampifandray ny fanjakana amin'i Kristy fa tsy Andriamanitra Ray (Kolosiana 1,13). .
Maro ny andinin-teny "Fanjakan'Andriamanitra" afaka manondro ny Fanjakan'Andriamanitra ankehitriny sy ny fahatanterahan'ny hoavy. Ny mpandika lalàna dia hatao hoe faran'izay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra (Matio 5,19: 20). Mamela fianakaviana isika noho ny fanjakan'Andriamanitra (Lioka 18,29). Miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika amin'ny fahoriana (Asan’ny Apostoly 14,22). Ny zava-dehibe indrindra ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny andininy sasany dia mazava tsara ao anatin'izao fotoana izao, ary ny sasany dia voasoratra mazava tsara amin'ny ho avy.
Taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanontany azy ny mpianatra hoe: "Tompo ô, hamerina ny fanjakana ho an'ny Isiraely ve ianao amin'izao fotoana izao?" (Asan’ny Apostoly 1,6). Ahoana no tokony hamalian'i Jesosy ny fanontaniana toy izany? Ny dikan'ny hoe "empira" dia tsy izay nampianarin'i Jesosy. Ny mpianatra dia mbola mieritreritra ny fanjakam-pirenena fa tsy olona mandroso miato izay avy amin'ny foko rehetra. Naharitra taona maro ny nahatsapan'izy ireo fa raisina an-tsaina ny mpanompo sampy ao amin'ny fanjakana vaovao. Mbola tsy teto amin'ity tontolo ity ny Fanjakan'i Kristy, fa tokony hihetsika amin'ity vanim-potoana ity. Noho izany dia tsy niteny i Jesosy na tsia - nilaza fotsiny izy ireo fa misy ny asa sy ny hery hanaovana an'io asa io (And. 7-8).
Ny Fanjakan'Andriamanitra tamin'ny lasa
Ny Matio 25,34 dia milaza amintsika fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia efa niomana hatry ny nanorenana izao tontolo izao. Misy foana amin'ny fotoana rehetra, na izany aza, amin'ny endrika samihafa. Andriamanitra dia mpanjaka ho an'i Adama sy Eva; nomeny fahefana sy fahefana izy ireo hanapaka; izy ireo no lefiny tao amin'ny sahan'i Edena. Na dia tsy ampiasaina aza ny teny hoe "fanjakana", dia tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Adama sy i Eva - eo ambany fitondrany sy ny fananany.
Rehefa nomen'Andriamanitra an'i Abrahama ny fampanantenany fa ho tonga firenena lehibe ny taranany ary hisy mpanjaka avy aminy (Genesisy 1: 17,5-6), dia nampanantena azy ireo ny fanjakan'Andriamanitra. Nanomboka kely anefa izy io, toy ny voankazo tao anaty bateria, ary nandritra ny an-jatony taona no nahitana ilay fampanantenany.
Rehefa nitondra ny zanak’Israely hiala tany Egypta ny zanak’Israely ka nanao fanekena tamin'izy ireo, dia nanjary fanjakà-mpisorona izy ireo (Eksodosy 2: 19,6), fanjakana izay an'Andriamanitra ary azo antsoina hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny fifanekena nataony tamin'izy ireo dia nitovitovy tamin'ireo fifanarahana nataon'ireo mpanjaka mahery tamin'ny firenena kely kokoa. Namonjy azy ireo izy ireo ary namaly ny Israelita - nanaiky ny ho olony. Andriamanitra no mpanjakany (1 Samoela 12,12; 8,7). Nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra i Davida sy i Solomona ary nanjaka tamin'ny anarany (1Ko 29,23). Fanjakan'Andriamanitra ny Isiraely.
Nefa tsy nankato an'Andriamaniny ny olona. Nandefa azy ireo Andriamanitra, saingy nampanantena izy fa haverina amin'ny laoniny ny firenena (Jeremia 31,31-33), faminaniana tanteraka amin'ny Fiangonana ankehitriny izay mizara amin'ny fanekena vaovao. Isika, izay nomena ny Fanahy Masina, dia fisoronana sy firenena masina izay tsy azon'ny Isiraely taloha (1 Petera 2,9; Eksodosy 2). Isika dia ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra, fa ny ahi-dratsy kosa manangona eo anelanelan'ny vokatra. Amin'ny faran'ny tontolo dia hiverina amin'ny hery sy ny voninahitra ny Mesia, ary hiova endrika indray ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakana izay manaraka ny arenika, izay lavorary sy ara-panahy dia samy hafa tanteraka amin'ny alalàn'ny taonarivo.
Koa satria ny fanjakana dia mitohy mitohy amin'ny tantara, dia marina ny miresaka azy ao amin'ny toetran'ny lasa sy ankehitriny ary ho avy. Ao amin'ny fivoarany ara-tantara dia nanana fahatanty lehibe izy ary hitohy hanao izany rehefa manomboka ny dingana vaovao. Niorina teo amin'ny Tendrombohitra Sinay ny fanjakana; natsangana tao anaty ary tamin'ny alàlan'ny asan'i Jesosy; hajoro eo amin'ny fiverenany aorian'ny fitsarana. Amin'ny ambaratonga rehetra, ny vahoakan'Andriamanitra dia hifaly amin'izay ananany ary hifaly amin'izay mbola ho avy. Rehefa mahatsapa lafin-javatra voafetra vitsivitsy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra isika, dia matoky isika fa ho tanteraka ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny hoavy. Ny Fanahy Masina no antoky ny fitahiana lehibe kokoa (2 Korintiana 5,5; Efesiana 1,14).
Ny Fanjakan'Andriamanitra sy ny Filazantsara
Rehefa maheno ny teny hoe empira na fanjakana isika dia ampahatsiahivina ireo fanjakana an'ity tontolo ity. Eto an-tany, ny fanjakana dia mifandray amin'ny fahefana sy ny fahefana fa tsy amin'ny firindrana sy ny fitiavana. Ny Fanjakana dia afaka mamaritra ny fahefana ananan'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviany, saingy tsy mamaritra ireo fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra antsika. Izany no antony ampiasàna ny sary hafa, toy ny anaram-pianakaviana, izay manamafy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahefany.
Marina daholo ny voambolana rehetra saingy tsy feno. Raha misy teny voafaritra tsara afaka mamaritra ny famonjena, ny Baiboly dia hampiasa an'io teny io. Fa sary avokoa izy rehetra, samy mamaritra ny lafiny iray amin'ny famonjena - ny iray amin'ireo teny ireo dia mamaritra ny sary iray manontolo. Rehefa nandidy ny Fiangonana hitory ny filazantsara Andriamanitra, dia tsy namerana antsika tsy hampiasa afa-tsy ny hoe "Fanjakan'Andriamanitra" izy. Nandika ny lahatenin'i Jesosy tamin'ny teny aramianina ka hatramin'ny teny grika ny apôstôly, ary nandika azy ireo tamin'ny sary hafa, indrindra fa ny metaphora, izay zava-dehibe tamin'ny mpanatrika tsy jiosy. Matthäus, Markus sy Lukas dia matetika mampiasa ny teny hoe "fanjakana". Jaona sy ny taratasy apôstôly koa dia mamaritra ny hoavintsika, nefa mampiasa sary hafa izy ireo hanehoana izany.
Ny famonjena dia teny amin'ny ankapobeny. Nilaza i Paul fa voavonjy isika (Efesiana 2,8), voavonjy isika (2 Korintiana 2,15) ary hovonjena isika (Romana 5,9). Nomen'Andriamanitra famonjena isika ary manantena antsika izy hamaly azy amin'ny finoana. Jaona dia nanoratra momba ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay ho toy ny zava-misy ankehitriny, fananana (1 Jaona 5,11: 12) sy fitahiana ho avy.
Ny metafora toa ny famonjena sy ny fianakavian'Andriamanitra - ary koa ny fanjakan'Andriamanitra - dia ara-dalàna, na dia famaritana fotsiny izany amin'ny drafitr'Andriamanitra ho antsika. Ny filazantsaran'i Kristy dia azo raisina ho filazantsaran'ny fanjakana, ny filazantsaran'ny famonjena, ny filazantsaran'ny fahasoavana, ny filazantsaran'Andriamanitra, ny filazantsaran'ny fiainana mandrakizay, sns. Ny filazantsara dia fanambarana fa afaka miara-miaina amin'Andriamanitra mandrakizay isika, ary ahitana fampahalalana azo tanterahina amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika.
Rehefa niresaka momba ny Fanjakan'Andriamanitra i Jesosy dia tsy nanasongadina ny fitahiany ara-batana na nohamafisiny ny fitantarany. Nifantoka kosa kosa ny tokony hataon’ny olona mba hananana anjara amin’izany. Ny mpamory hetra sy mpivaro-tena dia tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hoy i Jesosy (Matio 21,31), ary manao izany amin'ny finoana ny filazantsara izy ireo (V. 32) ary manao ny sitrapon-drainy (And. 28-31). Miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika rehefa mamaly an'Andriamanitra amin'ny finoana sy ny fahatokiana.
Ao amin'ny Marka 10, ny olona iray dia te handova ny fiainana mandrakizay, ary nilaza i Jesosy fa tokony hitandrina ny didy (Marka 10,17-19). Nanampy didy iray hafa i Jesosy: Nandidy azy ny hanome ny fananany rehetra ho an'ny harena any an-danitra (V. 21). Hoy i Jesosy tamin'ny mpianatra: "Ho sarotra ho an'ny manan-karena ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra!" (V. 23). Nanontany ny mpianatra hoe: "Koa iza no azo hovonjena?" (V. 26). Ao amin'ity fizarana ity sy amin'ny andalana mitovy ao amin'ny Lioka 18,18: 30, dia misy teny maromaro ampiasaina amin'io hevitra io ihany: mandray ny fanjakana, mandova fiainana mandrakizay, manangona harena any an-danitra, miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, voavonjy. Rehefa nilaza i Jesosy hoe "Manaraha ahy" (V. 22), nampiasa fomba hafa izy hanehoana zavatra mitovy: miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika amin'ny fampifanarahana ny fiainantsika amin'i Jesosy.
Ao amin'ny Lioka 12,31: 34-21,28, i Jesosy dia nanasongadina fa mitovy ny fomba fitenenana: mitady ny fanjakan'Andriamanitra, mahazo fanjakana, manana harena any an-danitra, mamoy ny fahatokisana amin'ny fananana ara-batana. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra isika amin'ny famaliana ny fampianaran'i Jesosy. Ao amin'ny Lioka 30:20,22 sy 24, ny fanjakan'Andriamanitra dia mitovy amin'ny fanavotana. Ao amin'ny Asa. 25:32.. mianatra isika fa nitory ny filazantsaran'ny fanjakana i Paoly, ary nitory ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoana. Mifandray akaiky amin'ny famonjena ny fanjakana - tsy mendrika ny hitory ilay fanjakana raha toa ka tsy manana anjara amin'izany isika ary afaka miditra amin'ny finoana sy ny fibebahana ary ny fahasoavana ihany, noho izany dia ampahany amin'ny hafatra rehetra momba ny fanjakan'Andriamanitra ireo. Ny famonjena dia zava-misy ankehitriny ary fampanantenana fitahiana ho avy.
Tao Korinto Paoly dia tsy nitory afa-tsy Kristy sy ny hazo fijaliana tamin'ny hazo fijaliana (1 Korintiana 2,2). Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 28,23.29.31,, dia lazain’i Lioka fa nitory ny fanjakan’Andriamanitra sy momba an’i Jesosy ary famonjena tany Roma koa i Paoly. Ireo lafiny samy hafa amin'ny hafatra kristianina mitovy io.
Ny Fanjakan 'Andriamanitra dia mifandraika fa tsy ny valisoa ho avy izao, fa noho ny fiantraikan'ny fomba iainantsika sy ny fomba fisainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Miomana ho amin'ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny hoavy isika amin'ny fiainana ao aminy ankehitriny, araka ny fampianaran'ny Mpanjakantsika. Rehefa miaina am-pinoana isika dia manaiky ny fanjakan'Andriamanitra ho toy ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika manokana, ary manohy amin'ny finoana isika amin'ny fotoana hoavy rehefa ho tanteraka ny fanjakana rehefa ho feno fahalalana ny Tompo ny tany.